Home Wararka Droneska Xil. Zakariya oo la ogaaday in loo soo iibiyay kooxda...
[XOG] Droneska Xil. Zakariya oo la ogaaday in loo soo iibiyay kooxda Shabaab.
Saraakiisha NISA ee ka howlgala Garoonka Adan Cadde ayaa qabtay lix ka mid ah 24 drones nooca loo yaqaan Mugin 3600VTOL. Sida MOL aay ogaatay shixnaddan oo ahayd lixdii (6) ugu horreeysay ayaa waxaa loogu talo galay in lagu carqaladeeyo Doorashooyinka laguna bar tilmaansada siyaasiyiinta iyo Madaxda Maamuul Goboleedyada ee ka soo horjeeda MW muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Diyaaradahan Droneka ah ayaa waxaa horey u isticmaalay kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalka Suuriya, waana nooca loogu talo galay in aay isku qarxiyaan meelaha loogu talo galay.
Droneskaan ayaa laga soo iibiyay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, adduun dhan $272, 145 oo doollarka Mareykanka ah.
Kooxda ISIS iyo kooxda Xisballlah ee ka dagaalama Suuriya iyo Lubnaan ayaa aad u isticmaala nooca Droneska Mugin 3600 oo ah kuwa uu dalka soo geliyay Xildhibaan Zakariya
MOL oo is barbar dhig ku sameeysay Droneska lagu qabtay Muqdisho iyo Mugin 3600 oo aay isticmaalaan kooxda ISIS halka hoose ka arag.
Droneskii Mugin 3600 oo aay soo rideen ciidamada Mareykanka magaalada Alebo ee dalka Suuriya
Waxaanan shaki ku jirin in Droneskaan loo waday kooxda Shabaab si loo carqaladeeyo Doorashooyinka loona qaarajiyo Madaxda Maamul Goboleedy
ada iyo Musharaxiinta ka aragtida duwan Farmaajo iyo Fahad Yasin. Waxaa kale oo aanu shaki ku jirin in qarashka lagu soo iibiyay Droneskaan aay bixisay dowladda Qatar oo rabta in Farmaajo uu dalka sii joogo.